Soo dejisan Tor Browser 9.0.5 – Vessoft
WindowsInternetkaDareemaha WebkaTor Browser
Bogga rasmiga ah: Tor Browser
Shabakadda Browser – browser ah si loo helo shabakad internet oo ammaan ah oo aan qarsoodi lahayn. Software waxay bixisaa ilaalin iyo magac la’aan adoo raacaya taraafikada shabakada ee shabakad isku xiran oo ah kuwa ugu deeqay tabaruceyaasha caalamka oo idil. Network Browser wuxuu hayaa macluumaad ku saabsan qalabka ama goobta isticmaalaha muuqaalka dadka kale. Sidoo kale, barnaamijku wuxuu awood u leeyahay inuu galo khayraadka internetka ee la xiray.
Raadinta internetka ee magac la’aanta ah
Faafinta gaadiidka soo socda iyo kuwa socda
Helitaanka khayraadka internetka ee la xiray
Mamnuucidda socodsiinta goobta isticmaalaha
Soo dejisan Tor Browser
Faallo ku saabsan Tor Browser
Tor Browser Xirfadaha la xiriira